Mirrors Nepal » रवीन्द्र मिश्रलाई खुलापत्र : यो अन्त्य होइन, सुरुआत हो
रवीन्द्र मिश्रलाई खुलापत्र : यो अन्त्य होइन, सुरुआत हो
१ पुष २०७४, शनिबार २०:३९
आदरणीय रवीन्द्र मिश्र सर,
चुनाव सिद्धिएको छ । मतपरिणाम पनि आइसकेको छ । मतरिणामले चुनावअघि धेरैले जस्तो अनुमन गरेका थिए, त्यस्तै तस्बिर देखियो । वाम गठबन्धन ठूलो भयो, कांग्रेस खुम्चियो । थुप्रै सानाहरू हराए । बिलाए । अनि, केही नयाँ फ्रन्टमा आए ।
हो, संख्या र सिट गन्दा निकै आशा गरिएको वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टी अपेक्षाअनुसार साइजमा आएन । तर, जति जे भयो, पायो– त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।
केही महिनाको मेहनत, बिनासंगठन, बिनातयारी जे–जति भोट विवेकशील साझाले पायो, त्यो ऐतिहासिक छ । ऐतिहासिक यस मनेमा कि– यति छोटो समयमै जनिमएको पार्टीले काठमाडौंमा शताब्दीदेखि मखमली सत्तामा ढलिमली गरेकालाई टक्कर दिने गरी शानदार र सम्मानजनक मत ल्यायो । अरू एक/दुई झोंक्का बल गरिएको थियो भने काठमाडौं–१ मा विवेकशील साझाको झन्डा गाडिन्थ्यो । यही हो– जनविश्वास र नयाँप्रतिको भरोसा ।
हो, चुनाव जितिएन । तर, जनताको मन जितियो । नयाँ कुरा बजारमा छ है भन्ने मानिसलाई पारियो । काठमाडौं–१ बाट झरेको १० हजार र देशभरिका तराजुमा झरेको २ लाखभन्दा बढी मत ठट्टा हैन । र, रवीन्द्र मिश्रको ८ सय १८ मतको हार आधा हार, आधा जित हो ।
अब चुनावअघिका केही प्रसंगबाट करा राख्छु ।
अस्तिको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावमा ती नै हजुरआमा भन्दैथिइन्– यो चुनाउमा चैं त्यो रेडियोमा बोल्ने नानीलाई छाप हान्छु । यताबाट उनलाई छाप हान्न मिल्छ कि मिल्दैन ? (भलै, उनले केमा भोट हालिन्, उनैलाई थाहा होला)
ती हजुरआमा काठमाडौंकी मतदाता होइनन् । तर, उनले यसपटक काठमाडौं–१ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका रवीन्द्र मिश्रलाई भोट दिन चाहेकी थिइन् । उनलाई आफूले भोट हाल्न चाहेको पार्टीको नामसम्म थाहा थिएन । भन्थिन्– नयाँ पार्टी जन्मेको छ रे ।
ती वृद्धा हजुरआमालाई मासिक भत्ता खुवाउने सरकारका सञ्चालक वा भत्ता केही सयबाट बढाएर हजारसम्म पुर्याइदिने पार्टीप्रति आकर्षण छैन (हुनुपर्ने त्यो थियो । तर, उनी नयाँलाई भोट हाल्ने संकल्पमा थिइन् । किन ?
जवाफ सजिलो र सिधा छ– उनी पनि नयाँ कुराको पखाईमा छिन् । उनलाई पनि लागेको रैछ, अहिलेका ठूला भन्ने दलले माखो मारेनन् । कुरै मात्रै गर्दै आए, आपसमा बाझ्दै–जुध्दै आए । तर, देश बन्दै बेनन । ७६ वर्षको उमेरमा अशिक्षित एक वृद्धा नामै थाहा नभएको पार्टी, राम्रोसँग नाम थाहा नभएको उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न तयार थिइन् ।
फेरि दल/नेताका भाषण सुन्छु– अर्को साल देशमै ५ लाख युवालाई रोजगारी दिन्छौं । सोच्छु– त्यो ५ लाखभित्र म पनि पर्छु । तर, नेताका यस्ता कुरा सुनेकै दशकौं भइसक्यो । अझै थुप्रै वर्ष जाने होलान् ।
हामीकहाँ विश्वकै अग्लो सगरमाथा छ । प्रकृतिले दिएका अनुपम सम्पदा छन् । केही सय किलोमिटरको बीचमा सप्ताकोसी, तमोर, नारायणी, कालीगण्डकी नदी छन् । हामीले यी सबैको सदुपयोग गर्न किन सकेनौं ? राज्य कहाँ चुकिरहेको छ ? यी सब गर्न बाधक बनिरहेको चिजको जात के हो ?
यो अन्त्य होइन, सुरुआत हो
तपाईं विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकको हैसियतमा हुनुहुन्छ । र, अब पार्टीलाई कस्तो बनाउने, कहाँ लैजाने, कस्तो ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने कुराको नेत्तृत्व तपाईंको हातमा छ । त्यसपछि अरू थुप्रै छन् ।
अहिलेको चुनावी परिणामबाट हतोत्साहित हुने वा टुक्रिने हैन, बरु थप बलियो र एकजुट हुने समय हो यो । विवेकशील साझा पार्टीले यति छोटो समयमै यो स्थान लिनुको अर्थ यसको यात्रा केही परसम्म मात्रै वा आवधिक छ भन्ने हैन, यात्रा लामो र फराकिलो छ भन्ने हो ।
अब ५ वर्षपछि आउने अर्को चुनावसम्म पार्टी बनाऊँ, सांगठनिक, वैचारिक र सेवाका हिसाबले पनि यसलाई तयार पारौं । देशैभरि स्वयंसेकको दस्ता खडा गरौं । वैकल्पिक शक्ति किन र केका लागि भन्ने स्पष्ट पारौं ।
र, अर्को चुनावका लागि मानसिक, सांगठनिक र राजीनितक हिसाबले पनि तयार हुँदै जाऊँ । यो विचलित हुने वा पलयान हुने समय होइन, थप मजबुत, संगठित र धैर्यवान् भएर अघि बढ्ने बेला हो । आफू पनि बुझौं र अरूलाई पनि बुझाऊँ– यो अन्त्य होइन, सुरुआत हो ।